Efa-taona nijoroana: mahantra vokatra ao an-toerana sy mahalafo betsaka sy be sivana ny tsenan’ny sarimihetsika saodiana · Global Voices teny Malagasy
Ny tsenan-tsarimihetsika saodiana no lehibe indrindra amin'ny tontolo arabo
Voadika ny 21 Jona 2022 5:20 GMT
Efa-taona izao ny Saodiana no navela hisitraka fijerena sarimihetsika any amin'ny teathra. Nanomboka tamin'izany fotoana izany mbola tsy nety nahazo ny fon'ny mpijery ny famokarana ao an-toerana, raha tratran'ny sitrapon'ny mpanao sivana kosa ireo filma iraisampirenena. Ny sary dia nopihana avy amin'ity video ity.
Efa-taona taorian'ny nanafoanan'ny manampahefana Arabo Saodiana ny fanapahan-kevitra nandrara naharitra am-polony taona maro ny sinema sy, noho ny fientanam-pon'ireo mpankafy sinema ao amin'ny fanjakana, nanome alalana ny trano fijerena sarimihetsika ara-barotra hisokatra, ny tsenan-tsarimihetsika Saodiana ankehitriny no lehibe indrindra ao amin'ny tontolo Arabo, ary lazaina ho misy akony amin'ny firenena Arabo hafa ny fanapahan-kevitry ny fanjakana handràra sarimihetsika.
Nilaza ny Raseef22, vavahadin-tserasera tsy miankina iray, tamin'ny fandraisana antontanisa avy amin'ny Fahefana Misahana ny Sarimihetsika ao amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina Saodiana fa, tamin'ny Avrily 2022 lasa teo (4 taona nisian'ny fijerena sarimihetsika), dia nahatratra 56 ny isan'ny sinema ao Arabia Saodita, ahitana efijery 518 amin'ny Tanàna miisa 20, izay nijerena sarimihetsika 1 144.
Ny tarehimarika ofisialy navoakan'i Raseef22 no nahitana fa nahavory 238 tapitrisa dôlara tamin'ny herintaona ny tsenan-tsarimihetsika saodiana tamin'ny varotra nataony na dia teo aza ny fameperana amin'ny fahafahan'ny trano fijerena sarimihetsika (mandray olona) vokatry ny valan'aretina, nihoatra noo ny tsenan-tsarimihetsika EAM efa matotra kokoa, izay nahatratra $ 122 tapitrisa monja no azony tamin'io taona io ihany, noho ny fampihenana ny fahafahan'ny teathra mandray olona noho ny Corona izay naharitra hatramin'ny Febroary 2022 lasa teo. Nahatratra 30,9 tapitrisa ny isan'ny tapakilan-tsarimihetsika lafo tany Saodita, mametraka azy ho tsenan'ny sinema Arabo lehibe indrindra.
Ary na dia mbola tsy nahita fahombiazana tamin'ny famokarana ho an'ny daholobe teo an-toerana aza ireo mpamokatra sarimihetsika Saodiana, dia mbola asaina amin'ny fetibe iraisampirenena ihany izy ireo mba hijerena ny fanatontosany.
Fanampin'izay, tamin'ny fanehoana fisokafana sy fileferana ara-kolontsaina, nanomboka tamin'ny 15 Jona ny Fetiben'ny Sarimihetsika Eoropeana voalohany tao Saodita, izay nahitana sarimihetsika miisa 14 avy amin'ny kaontinanta naseho teo anoloan'ny mpankafy.
Tiako sy mahafaly ahy ny mahita ny fivoaran'ny sehatrasa sarimihetsika. Lanonana tsy hita raha tsy tany amin’ny masoivoho ihany. Ny fampisehoana an'ity karazana sarimihetsika ity no hiteraka fahatsiarovan-tena ho an'ny Saodiana momba ireo olana tsy mahazatra azy ireo ary hanome traikefa ho an'ny Sehatrasan'ny Filma Saodiana
Ary nifanaraka tamin'ity hetsika ity izay nambara tamin'akoralava be ilay adihevitra mangingina kokoa tao amin'ny Twitter miresaka ny fandraràna ilay sarimihetsika iraisampirenena hafa amin'ny trano fijerena sarimihetsika: ilay malaza Lightyear an'ny Disney. Na dia maro aza no nankasitraka ilay fandraràna, dia misalasala amin'ny fomba fitsaràn'ny mpanao sivana kosa ny hafa.
Ny Lightyear no nanjary sarimihetsika farany avy amin'ny The Walt Disney Studios nolavina tany Arabia Saodita, Emirà Arabo Mitambatra ary Koety noho ny votoaty LGBTQ+. Faha-4 taorian'ny West Side Story, Eternals ary Dr Strange 2.
Tany am-piandohan'ity taona ity, niditra tao amin'ny Twitter ny Saodiana mba hiresaka ny fandraràna ilay Dr Strange 2 malaza be, izay nolazain'ny manampahefana fa ahitana mari-piavahana LGBTQ maro.
Nanoratra ny mpikirakira iray, Mubarak Al-Deifallh
Raha misy zavatra tsara holazaina momba ny fisokafan'ny trano fijerena sinema eto Saodita, dia ny fandefasana hafatra ho an'izao tontolo izao momba ny hetsika mifanohitra amin'ny toetran'olombelona, amin'ny fandrarana ny fandefasana sarimihetsika mihaika ny natiora sy ny tsiro (tadiavin'ny) besinimaro. .
Nandritra izany fotoana izany, mpikirakira iray hafa nandranty tamin'io fotoana io:
#Mandrara_DrStrange_eto_Saodita Raha marina izany dia aza manokatra sinema fotsiny aloha raha toa ka mandrara izay sarimihetsika tsy tianao.
Ho fanoherana ny fandraràna, mivaky toy izao ranty iray tao amin'ny Twitter:
(tsy tia) marvel aza saingy maninona no raran'izy ireo ny film ahitana mpilalao pelaka nefa avelan'izy ireo ny film izay sionista be hambo ilay mpilalao sarimihetsika vehivavy voalohany satria fantany tsara fa ho any israely daholo ny fandehany (vola azo amin'izany)?
Nanoratra tao amin'ny Twitter ny mpankafy Marvel iray tamin'izany fotoana izany:
Amin'ny maha mpankafy marvel ahy dia efa ho herintaona no niandrasako ilay sarimihetsika dia tsy hahita ilay sarimihetsika aho noho ilay 10 seg !!!
Ary tsy miresaka fivavahana aho satria tamin'ny In Spider-Man no Way home dia nisy nifanoroka ara-bakiteny (ka) taiza izy ireo tamin'izay
Ary misy ny mahatsapa fa tokony ho nanaiky ny fangatahan'ny Saodiana ny Disney mba hanapahana ilay sehatra 12 segondra mampiady hevitra. Hoy ny feo iray manambara toy izany:
Be dia be ny olona efa niandry hatramin'ny 2019 !!! 3 taona! Ary ankehitriny lasa alikavavy i disney!